Xogo ku saabsan sida la isaga ilaaliyo COVID 19 – Daryeelsan
Si aan ula dagaallanno cudurka Covid-19 waa inaan nadaafadda gacmaheenna dhowrnaa. Cudurku wuxuu ku dhuuman karaa gacmaheenna, sidaas darteed waa muhiim inaad sida ugu habboon u dhaqdaa gacmahaaga.
Hadda hoos ka eeg tusmooyin sawirro ah iyo faylal PDF ah oo tilmaamaya sida aad isaga ilaalin karto cudurka.
Nadaafadda iyo COVID 19
Tumsooyinka oo PDF ah linkiyada hoose ka eeg.
Toban tallaabo nadaafadda
toddobo tallaabo oo gacmo dhaqashada ah